Amanqaku kaThea C. Myhrvold kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Umxholo C. Myhrvold
Umxholo C. Myhrvold
U-Thea C. Myrhvold ngumseki owaziwayo kwihlabathi liphela kunye ne-CEO yeGETBee, iqonga lokwabelana ngolwazi nge-B2B eliyilelwe ukuphucula amava okuthenga kwabathengi kunye nokuguqula ikamva lomsebenzi. Ngerekhodi lokufezekisa itekhnoloji kunye nokuyila ngaphezulu kweminyaka eli-10, uyaziwa ngobunkokeli obuqinileyo kunye nezakhono zonxibelelwano kunye nesakhono esingokwemvelo sokwakha kunye nokulinganisa ukuqala kwetekhnoloji.
Kutheni unxibelelwano lweemvakalelo luya kuba yinto ephambili kule Mpumelelo yokuThengisa yeXesha leholide
NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021 NgoLwesithathu, Oktobha 20, 2021 Umxholo C. Myhrvold
Ngaphezu konyaka, abathengisi bebejongana nefuthe lobhubhane kwintengiso kwaye kujongeka ngathi indawo yentengiso imiselwe ukujongana nelinye ixesha elinzima lokuthenga ngeeholide ngonyaka ka-2021. ngokuthembekileyo kwisitokhwe. Iiprotokholi zokhuselo ziyaqhubeka ukuthintela abathengi ekwenzeni utyelelo ezivenkileni. Kwaye ukunqongophala kwabasebenzi kushiya iivenkile zixakekile xa kufikwa kwinkonzo yabathengi